နင့်ဖ် - ဝီကီပီးဒီးယား
နင့်ဖ် (အင်္ဂလိပ်: nymph; ဂရိ: νύμφη, nýmphē; ရှေးဟောင်းဂရိ: [nýmpʰɛː], ခေတ်သစ်ဂရိ: [nímfi]) ဆိုသည်မှာ ရှေးဟောင်းဂရိပုံပြင်များ၌ပါဝင်သော သဘာဝတရားနှင့်ပတ်သက်သည့် နတ်သမီးအငယ်စားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဂရိနတ်ဘုရားမ/နတ်သမီးများနှင့်မတူဘဲ နင့်ဖ်များကို ယေဘုယျအနေဖြင့် သဘာဝတရားအား ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်းနှိုင်းတင်စားမှုအဖြစ် ရှုမြင်ယူဆကြကာ နေရာတစ်ခုခု (သို့) မြေပြင်ပေါ်ရှိ မြေအနေအထားပုံစံတစ်ခုခုကို နှင့်ဆက်စပ်ဖော်ပြကြပြီး အများအားဖြင့် လှပသောမိန်းမပျိုများအဖြစ် ဖော်ကျူးတင်ဆက်ကြသည်။ မသေမျိုးမဟုတ်ကြသော်လည်း လုသားများထက် ရှည်လျှားသော ဘဝသက်တမ်းရှိကြသည်။
ဟိလပ်စ်နှင့် နင့်ဖ်၊ ၁၈၉၆၊ ဂျွန် ဝီလျံ ဝေါတားဟောက်စ်၏ ပုံ၊ (ဟိလပ်စ်ကို မြစ်စောင့်နင့်ဖ်များက ဖြားယောင်းသွေးဆောင်နေစဉ်)
နင့်ဖ်များကို အုပ်စုငယ်အမျိုးမျိုး ခွဲကြလေ့ရှိကြရာ သစ်ပင်စောင့်နတ် (မီးလီယီး - Meliae) ၊ မြစ်ချောင်းစောင့်နတ် (နိုင်းယာ့ဒ်ဇ်/နေးယာ့ဒ်ဇ် - Naiads) ၊ ပင်လယ်စောင့်နတ် (နီယာရီးယစ်ဒ်ဇ် - Nereids) နှင့် တောင်စောင့်နတ် ( အောရီယာ့ဒ် - Oreads) စသည့် နတ်သမီးအုပ်စုများ ပါဝင်သည်။
နင့်ဖ်နတ်သမီးငယ်များကို ဇာတ်လမ်း၊ ဒဏ္ဍာရီ၊ စာပေ၊ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများတွင် ဖော်ကျူးလေ့ရှိကြကာ အလယ်ခေတ် (medieval) ကာလများမှစ၍ ယခုအထိ နင့်ဖ်များသည် ရံခါတွင် ဖယ်ရီခေါ် နတ်သမီးများနှင့်လည်း နှီးနွှယ်မှုရှိခဲ့ကြကာ ရောထွေးမှုများပင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
↑ Genealogical Guide to Greek Mythology: Nymphs။ Astrom Editions (1997)။
↑ Grimal, p. 313, s.v. Nymphs.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နင့်ဖ်&oldid=655485" မှ ရယူရန်
၁၉ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။